ပျော်စရာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတာကြောင့် သေနတ်ကြီးတွေကိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနဲ့ ကနေကြတဲ့ PDF လူင ယ်လေးတွေ (ရုပ်သံ) – Shwe Thadin
ပျော်စရာဆိုလို့ ဒါပဲရှိတာကြောင့် သေနတ်ကြီးတွေကိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနဲ့ ကနေကြတဲ့ PDF လူင ယ်လေးတွေ (ရုပ်သံ)
ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ တောထဲဝင်ပြီး အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်နေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေ ကတော့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားနေကြ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာ ဆောင်းရာသီ လည်း ရောက်လာပြီဖြစ်လို့ လူငယ်လေးတွေကတော့ တောတောင်ထဲမှာ ချမ်းစိမ့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ပြည်သူ တွေက ပြည်မကြီးထဲမှာ မိုးကြို က်သလောက်ရွာပြီး တောတောင်ထဲမှာ မရွာပါနဲ့ဦးလို့ ဆု တောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ ပြ ည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း စေတနာရှင်တွေက လှူဒါန်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေ ကတော့ ရဲစွမ်းသတ္တိအပြည့်ရှိ ကြလို့ ဘယ် လိုဒုက္ခမျိုးကိုမဆို စိတ်ဓာတ် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ အတူ နွေးနွေးထွေးထွေး နေထိုင်နေရမယ့် အခုလိုအချိန်မှာ အများအကျိုးအတွက် တောတောင်ထဲမှာ ဖြစ်သလိုနေထိုင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောထဲမှာ ရှိနေတဲ့ PDF လေးတွေရဲ့ ပုံတွေထဲမှာ ဒီပုံလေးကိုတွေ့တော့… ရင်ထဲ မှာ…ခံစားရတယ်။ ငါတို့ခလေး…. တွေ… အနာဂတ်တွေ လှပပါစေ… ကောင်းမွန်နွေး ထွေး တဲ့ နိုင်ငံ တော်သစ်…ဆီသို့ အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင် ရပါစေ…အောင်မြင်ရပါစေ…..
ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ေတာထဲဝင္ၿပီး အျပင္းအထန္ ေလ့က်င့္ေနၾကတဲ့ လူငယ္ေလးေတြ ကေတာ့ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေဆာင္းရာသီ လည္း ေရာက္လာၿပီျဖစ္လို႔ လူငယ္ေလးေတြကေတာ့ ေတာေတာင္ထဲမွာ ခ်မ္းစိမ့္ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူ ေတြက ျပည္မႀကီးထဲမွာ မိုးႀကိဳ က္သေလာက္႐ြာၿပီး ေတာေတာင္ထဲမွာ မ႐ြာပါနဲ႔ဦးလို႔ ဆု ေတာင္းေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြနဲ႔ ျပ ည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ေတြ လိုအပ္မယ့္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ေစတနာရွင္ေတြက လႉဒါန္းေပးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူငယ္ေတြ ကေတာ့ ရဲစြမ္းသတၱိအျပည့္ရွိ ၾကလို႔ ဘယ္ လိုဒုကၡမ်ိဳးကိုမဆို စိတ္ဓာတ္ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုနဲ႔ အတူ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေနထိုင္ေနရမယ့္ အခုလိုအခ်ိန္မွာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေတာေတာင္ထဲမွာ ျဖစ္သလိုေနထိုင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေတာထဲမွာ ရွိေနတဲ့ PDF ေလးေတြရဲ႕ ပုံေတြထဲမွာ ဒီပုံေလးကိုေတြ႕ေတာ့… ရင္ထဲ မွာ…ခံစားရတယ္။
ငါတို႔ခေလး…. ေတြ… အနာဂတ္ေတြ လွပပါေစ…ေကာင္းမြန္ေႏြး ေထြး တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္သစ္…ဆီသို႔ အျမန္ဆုံးပိုင္ဆိုင္ ရပါေစ…ေအာင္ျမင္ရပါေစ…..